कलेजमा सेल्फी लिदैं, कपाल कोर्दै हुनुहुन्छ? निष्कासित हुनु पर्ला !
नयाँ दिल्ली, पुस २७ (एजेन्सी) print
भारतको चर्चित दिल्ली विश्वविद्यालयका छात्राहरूका लागि कलेजभित्र सेल्फी लिनु र कपाल कोर्नु घातक बन्न सक्छ। किनभने कलेज प्रशासनले विश्वविद्यालयमा रहेको मिरान्डा हाउसका छात्राहरूलाई कलेजभित्रको बाटोमा सेल्फी नलिन र कपाल नकोर्न नोटिस जारी गरेको छ।
प्रशासनको सुझावलाई अटेर गरेको खण्डमा छात्राहरू कलेजबाट निष्कासित हुन सक्ने सम्भावना बलियो छ। प्रशासनको तर्फबाट नोटिस त्यतिबेला सार्वजनिक भएको थियो, जब स्कुल अफ ओपन लर्निङ (एसओएल) का छात्र गत आइतबार कक्षामा उपस्थित थिए।
नोटिसमा कलेजको गल्लीहरुमा सेल्फी लिनु र कपाल कोर्नुलाई समयको बर्बादी भनिएको छ। एसओएल विद्यार्थीको एउटा क्रान्तिकारी युवा संगठन हो। जसले कलेजले हालै सार्वजनिक गरेको नोटिसलाई महिला विरोधी भन्दै विरोध गरेको छ।
गठनले दिल्लीको महिला आयोगलाई समेत विश्वविद्यालयको नोटिसको विषयमा जानकारी गराएको छ।
नोटिसमा भनिएको छ, ‘मिरान्डा हाउस र शिक्षक सधै तपाईहरूको उच्च शिक्षा सुनिश्चित गर्न संघर्षरत रहदै आएको छ। हामी आशावादी छौं, छात्राहरूलाई यो निर्णयले आफ्नो पढाईमा केन्द्रित रहन फाइदा पुग्ने छ। केही छात्रा गल्लीमा सेल्फी लिदैँ गरेको, कपाल कोर्दै गरेको र मोडलिङ गर्दै गरेको भेटिएका छन्।’
कलेजले यसलाई समयको दुरुपयोग भन्दै अनुमति दिन नसकिने बताएको छ। कुनै विद्यार्थीले समयको दुरुपयोग गरेको भेटिएमा उसलाई त्यो दिन कलेजबाट निलम्बित गरिने र कलेज परिषरबाटै बाहिर राखिने बताइएको छ।
नोटिसको मिरान्डा हाउस कलेजकी प्रधानाध्यापक प्रतिभा जोलीले पुष्टी गरिन्। उनले सुरक्षाको कारण आन्तरिक चर्चापछि यो निर्णय लिएको बताइन्। तर, एसओएलका निर्देशक सीएम दुबेले भने हालसम्म आफूलाई कुनै नोटिस प्राप्त नभएको बताए।
बुधबार, पौष २७, २०७३ १९:४६:०२